Ogaden News Agency (ONA) – ESAT oo Laga Wareystay mudane Cabdulaahi Xuseen Eedayntii Cabdi Iley usoo Jeediyay R/wasaaraha Itobiya
ESAT oo Laga Wareystay mudane Cabdulaahi Xuseen Eedayntii Cabdi Iley usoo Jeediyay R/wasaaraha Itobiya
Qoraal uu Cabdi illey ku daabacay shabakadda uu ku adeegto ee cakaaranews.com oo muddo yar ka dibna laga saaray ayuu Cadi ileu ku eedeeyay Raysalwasaaraha dalka Itobiya Haile mariam desalegn iyo Madaxa sirdoonka Getachew assefa oo uu ku sheegay inay ka danbeeyeen ninkii maalinka dhawayd Cabdi illey ku weeraray hoteelkii uu ku dhuumanayay ee mobile ka ka duubay. Qoraalku ayuu waxaa kaloo uu ku sheegay inay sidoo kale Eritrea, Ginbot7 iyo ESAT kulug lahaayeen.
Qoraalkaa ayuu Cabdi iley isku xidhay raysal wasaaraha Itobiya, madaxa sirdoonka, Eritrea, Ginbot 7 iyo TV-ESAT oo uu sheegay inay dhinac ka wada jiraan cabdi illey ninkaasna ay iyagu soo dirsadeen.
Halkan Ka Daawo areysigaa Xiisaha leh.
Tarjumaada jawaabaha mudane Cabdulaahi Xuseen sidan ayay u dhacay;
Ugu horey waxuu Cabdulaahi Xuseen ka hadlay shabakaddan Cakaara iyo siyaabaha uu Cabdi iley wax ugu qoro iyo taariikhda la furay, wuxuuna sheegay in sababta uu Cabdi iley wax ugu qoro Cakaara ay tahay isagoo isleh dawladda dhexe ee fadaraalku akhrisan maayaan af-soomaaliga lamina socdaan waxa lagu qoro, sidaas ayuuna siduu doono ugu hadlaa. Hadaba maadaama uu hadhow odhan doono Cakaara anigu malihi, waxaa muhiim ah in laxasuusto website-kan in lafuray 2009 waxaana lagu furay aniga magacayga waxaana laga furay shirkad ku taala Addis Ababa lana yidhaahdo Habesha.net oo markii iigu dambaysay daganayd dabaqa la yidhaahdo Getu Commercial. Intii aan soo baxayna waxaa lagu badalay magaca Cabdi illey walaalkiis ka yar oo layidhaahdo Khadar illey, marka way iska cadahay inuu isagu website ka leeyahay mana dafiri karo. Website kaas lacagta lagu maamulo waxaa laga gooyaa lacagta loogu tallo galay liyu police ka waana website lacagta dawlada lagu maamulo kuna hadla magaca dawlada.
Qoraalkan uu ku eedeynayo R/wasaaraha iyo taliyaha sirdoonka, maadaama uu markiiba ka tirtiray, si uusan u dafirin dad badan ayaa copy ka sameeyay hadana inta aan idin la hadlayo computerkayga ayuu dulsaaranyahay oo aan ka akhrinayaa balse hadii loo baahdo aad ayay u fududahay sida loo helaa oo waxaa lagu raadin karaa Google.com iyo yahoo.com search iyo qaabab kale oo badan qof kastaana wuu heli karaa waxaana sidoo kale hadii loo baahdo si dhibyar lahaanshaha website ka iyo qoraalkanba usoo saari kara Ethiopian telecommunication marka iyada wax dafiraad ladhahaa masoconayaan .
Su’aashi labaad waxay ahayd maadaama uu Cabdi illey madaxdiisii aflagaadeeyay dambina dusha ka saaray malaga yaabaa inay wax yeelaan markuu noqdo.
Wuxuu ku jawaabay mudane Cabdulaahi Xuseen; Sidaan hada ka hor lasoconay 11 kii nin ama 12 kii nin ee ugu sareeyay xisbiga kililka maamula waxay u kala qaybsameen meel 7 ah iyo meel 4 ah oo uu Cabdi illey ku jiro ah ugu danbayntiina markii ay Cabdi illey eryi rabeen ayaa waxaa soo fara galiyay Gen. Abreha oo ah ninka haysta ciidanka Ogadenia ku sugan iyo Hararge isagoo sitoos ah u taageeray Cabdi illey halkaasna ay todobadii kale ugu baxsadeen Addis Ababa. Dhanka kale waxaa dhacay inay madaxda fadaraalka oo uu kamid yahay Madaxa sirdoonta Getachew iyo R/wasaare Haile Mariam ay dhinacooda ka taageereen 7 badii nin, Addis Ababana magan galyo ku siiyeen maadaama uu Cabdi illey daba socday ilaa hadana ay halkaas ku sugan yihiin intoodii badnayd. Wakhtigaas inkastoo ay fadaraalku rabeen inay Cabdi illey badalaan siday rabeen wax uma dhicin ee sidii ay ciidanku rabeen ayay wax u dheceen, marka sidaan anigu aamin sanahay awooda waxaa iska leh ciidanka, Getachew iyo Haile Mariam na wax awood ah oo ay Cabdi illey wax ku yeelaan malaha marka waxaan aaminsanahay inuuna Cabdi illey waxba noqon doonin markuu noqdo maadaama awoodu ay tahay xaga ciidanka nimankaasina aysan wax awood ah lahayn.
Dhanka kale Cabdi iley qoraalkaas wuxuu ku qoray odhaahdan; Geeloow daaqoo daaqoo markaad qanboor daaqdaa laguu yaabaa, oo ay macnaheedu tahay Fadaraaloow markaad Cabdi illay taabataanbaa la idiin yaabaa, marka bal waan eegi doonaa waxa uu sameeyo maadaama uu odhaahdaasna isticmaalay sheegayna inay nimankaasi ka danbeeyeey arintii ku dhacday .